यो अ lesson्ग्रेजी पाठमा हामी अंग्रेजीमा नम्बरहरूको लेक्चर देख्नेछौं। पहिले हामी १० सम्म अंग्रेजी स about्ख्याको बारेमा नमूना वाक्यहरू लेख्नेछौं, त्यो अ English्ग्रेजीमा नम्बरहरू, त्यसपछि १०० सम्म अंग्रेजी नम्बर, र अ numbers्ग्रेजी नम्बरहरू। हामी अंग्रेजी नम्बर को हिज्जे र उच्चारण को बारे मा जान्न सक्छौं।
अंग्रेजी नम्बरमा यस शीर्षकमा हामी निम्न शीर्षकहरू कभर गर्नेछौं:
अंग्रेजीमा १०० सम्म नम्बरहरू
अंग्रेजीमा हिज्जे र नम्बरहरूको उच्चारण
अंग्रेजीमा नम्बरहरू याद गर्ने तरिका
अंग्रेजीमा दशमलव संख्या कसरी उच्चारण गर्ने
अंग्रेजीमा फ्र्यान्श्नल नम्बरहरू कसरी उच्चारण गर्ने
अंग्रेजीमा प्रतिशत कसरी उच्चारण गर्ने
अंग्रेजीमा मिति र बर्ष कसरी पढ्ने
अंग्रेजीमा नम्बरहरू कसरी लेख्ने
अंग्रेजी नम्बरहरू; टर्की संख्या जस्तै, यो एक निश्चित व्यवस्थित अनुसार बनाईएको छ। जे होस्, यदि तपाईंले कामको तर्क बुझ्नुभयो भने, तपाईं सकेसम्म छिटो संख्याको हिज्जे र उच्चारण दुवै सिक्नुहुनेछ। यस सन्दर्भमा, सर्वप्रथम, तपाईले दुबै हिज्जे र उच्चारण १ को १०० बाट सबै अंकहरूको सिक्नु पर्छ। जहाँसम्म, तपाईले १ देखि १० सम्म सबै नम्बरहरू फिट गर्न प्राथमिकता दिनुपर्दछ। हामी भन्न सक्छौं कि १० देखि १०० सम्मका अन्य अंकहरू सिक्न धेरै सजिलो हुनेछ।
पहिले हामी तपाईलाई भिजुअल दिन्छौं, तब अंग्रेजी स numbers्ख्या एक-एक गरेर सय सम्म लेखौं।
तल अंग्रेजी स one्ख्याहरू एकदेखि एक सय सम्म छन्।
० - शून्य (जीरो)
१ - एक (भ्यान)
२ - दुई (तू)
- - तीन (तीन)
- - चार (को लागी)
- - पाँच (गल्ती)
- - छह (साइक्स)
- - मायालु (प्रेम)
- - आठ (eyt)
- - हजुरआमा (नयन)
१० - दस (छाला)
११ - एघार (लिफ्टिन)
१२ - बाह्र
१ - - तेह्र (समारोह)
१ - - चौध (फोर्टिन)
१ - - पन्ध्र (फिफ्टीइन)
१ - - सोलह (सिक्स्टिन)
१ - - सत्रौं (रमाउनुहोस्)
१ - - अठारह (अठार)
१ - - उन्नीस (nayntiin)
२० - बीस (ट्युर्टी)
२१ - एक्काइस
२२ - बाईस (टुभेन्टी तू)
२ - - तेईस (tuventiy tırii)
२ - - चौबीस (ट्युभेन्टीको लागि)
२ - - पच्चीस (tuventiy fayf)
२ - - छब्बीस (tuventiy siks)
27 - सत्ताइस (प्रेम tuventy)
२ - - अट्ठाईस (tuventiy eyt)
२ - - २ twenty (tuventiy nayn)
--० - तीस (törtiy)
--१ - एकतीस (t vanrtiy भ्यान)
--२ - बत्तीस (t trtiy tu)
- 33 - तेतीस (törtiy tıri)
- 34 - चौंतीस (törtiy को लागी)
- 35 - पैंतीस (t frtiy fayf)
- 36 - छत्तीस (t sirtiy siks)
- 37 - तीस मायालु (प्रेम törtiy)
- 38 - तीस
- - - तीस Nine ((Ttirtiy Nayn)
--० - चालीस (चालीस)
--१ - एकचालीस (फोर्टी भ्यान)
--२ - बयालीस (फोर्टी तू)
- 43 - पैंतीस (चालीस प्रकार)
- 44 - चौंचालीस (चालीसको लागि)
- 45 - पैंतालीस (चालीस प्याया)
- 46 - छयालीस (चालीस छ)
- 47 - स्याहत्तर (प्रेम fortiy)
- 48 - ti For
- - - उनन्चालीस (चालीस नयन)
--० - पचास (पचास)
--१ - इक्कीसौं (फिफ्टी भ्यान)
--२ - बावन (फिफ्टी टु)
- 53 - त्रिपन्न
- 54 - चौवन्न (पचास)
- 55 - पचासी (अर्धशतक fayf)
- 56 - छप्पन (पचास सेक्स)
- 57 - पचास-मायालु (प्रेम फिफ्टी)
58 - अठ्ठासी
- - - उन्चास (पचास नयन)
--० - साठ (सिक्ठी)
--१ - एकसठ (एकपटक भ्यान)
--२ - बयासठ (siksti tu)
- 63 - पैसठ्ठी
- 64 - चौसठ (सिक्काका लागि)
- si - पैसठ्ठी (siksti fayf)
- 66 - छठ्ठी (सिक्स्टी सिक्स)
- 67 - xt०-मायालु (प्रेमको चुपचाप)
- 68 - अठ्ठठ्ठी
- - - सयहत्तर
--० - सत्तरी (रमाउनुहोस्)
--१ - सत्तरी
--२ - बहत्तर (सत्तरी तू)
- 73 - सयहत्तर
- 74 - चौयासी (चौयासी)
- 75 - पचहत्तर (सेभिन्ती फ्याफ)
- 76 - सत्तरी
- 77 - सत्तरी मायालु (प्रेम रमाउनुहोस्)
- 78 - सत्तरी
- - - सयहत्तर (सत्तरी नयन)
--० - अस्सी (eyti)
--१ - एसी वन (eyti भ्यान)
--२ - बयासी (eyti tu)
- 83 - अस्सी
- 84 - चौरासी (eyti का लागि)
- 85 - पचासी (eyti fayf)
- 86 - छयासी (eyti siks)
- 87 - अस्सी मायालु (माया eti)
- 88 - अठ्ठासी (eyti eyt)
- - - अठ्ठाइस (eyti nayn)
90 - नब्बे (naynti)
- १ - नब्बे वन (नयन्ती भ्यान)
- २ - बानानौं (नयन्ती तू)
-। - उनान्तीस
- - - चौयान्न (को लागि naynti)
- - - पचासी (naynti fayf)
- - - नब्बे छत्तीस (नयनती सिक्स)
- - - नब्बेतीस (प्रेम नयन्ती)
98 - नब्बे
- 99 - नब्बे उन (नयनती नाइन)
१०० - एक सय (भ्यान ह्यान्डर्ड)
एकचोटि तपाईंले ० देखि १० सम्मका सबै नम्बरहरू थाहा पाउनुभयो भने, तपाईं ११ देखि १०० सम्म अन्य नम्बरहरू सिक्न जारी राख्न सक्नुहुन्छ। जहाँसम्म हामीले भनें, तपाईंको प्राथमिकता संख्या १-१० हुनुपर्दछ! यस बीच, शून्य (०) अंग्रेजीमा शून्यको रूपमा लेखिएको छ र जीरोको रूपमा पढिएको छ।
अंग्रेजी; यस भाषाको बारेमा शिक्षा महत्वपूर्ण हुन्छ किनकि यो जीवनको सबै क्षेत्रहरूमा देखा पर्दछ। प्रत्येक व्यक्तिको पेशा, प्रशिक्षण क्षेत्र र विशेष रुचिहरूको लागि अंग्रेजी आफ्नो ज्ञान सुधार गर्न पर्छ! यस बिन्दुमा, अ English्ग्रेजी शिक्षा शुरू गर्नेहरू पहिलो हुन् अंग्रेजी शब्द तिनीहरूले आफ्नो शब्दावली विकास गर्न आवश्यक छ। साथै, साधारण अंग्रेजी अभिव्यक्ति सिक्ने बान्कीलाई पनि लक्षित गर्नुपर्छ। थप रूपमा, विश्वका अन्य भाषाहरू जस्तै त्यहाँ केहि विषयहरू छन् जुन सबैले अंग्रेजीमा जान्नुपर्दछ। यी मुद्दाहरूको शीर्षमा नम्बरहरू छन्!
अंग्रेजी सिक्नुहोस् तपाईको तर्फबाट जे पनि उद्देश्य छ, तपाईले निश्चित रूपमा संख्या र संख्या को अंग्रेजी बराबर सिक्नु पर्छ। अन्यथा, तपाइँ अंग्रेजी शिक्षाको अर्को चरणमा जान सक्नुहुन्न। नम्बरहरू; यसमा शब्दहरू समावेश हुन्छन् जुन दैनिक जीवनको प्रत्येक बिन्दुमा अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्दछ। अंग्रेजी नम्बरहरू र तिनीहरूको हिज्जे र उच्चारण निश्चित रूपमा सिक्नुपर्दछ।
अंग्रेजी नम्बरहरू एक विशेष योजना अनुसार सिक्नु आवश्यक छ। अन्य भाषाहरू जस्तै, अंग्रेजी पनि केही सिद्धान्तहरूमा निर्मित छ। अंग्रेजी; यो अनियमित वा मनमानी तरिकामा सिक्ने भाषा हैन। यद्यपि अ English्ग्रेजीमा बोल्ने र लेख्ने आधारभूत सिद्धान्तहरू बुझिसकेपछि यसको बाँकी रहेको कुरा सिक्न यो सजिलो हुनेछ। अंग्रेजीमा संख्या सिक्दै यो परिभाषा धेरै राम्रो फिट गर्दछ।
अंग्रेजीमा स ?्ख्या सिक्दा तपाईंले कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ?
अंग्रेजी नम्बरहरू; हामीले अघि नै भनेजस्तै यसको पनि ताल छ। अर्को शब्दहरुमा, यो एक निश्चित व्यवस्थित संग नियमित छ। त्यसकारण तपाईं अ English्ग्रेजीमा स numbers्ख्या सजीलै सिक्न सक्नुहुनेछ। संख्याहरू सिक्दै यो गाह्रो लाग्न सक्छ। यस विन्दुमा, तपाईले नम्बर १ देखि १० सिकेर सुरु गर्नुपर्दछ। यी संख्याहरू सिक्नु तपाईंको लागि गाह्रो हुँदैन। किनभने हामीले व्यक्त गर्नुपर्दछ कि ती नम्बरहरू हुन् जुन तपाईं स्कूल, टिभी र अन्य धेरै स्थानहरूमा परिचित हुनुहुन्छ।
अ numbers्ग्रेजी नम्बरहरूमा विशिष्ट संकेतहरू छन्। १२ देखि १ from सम्मका सबै अंकहरू अन्तीममा १ adding थपेर सिक्न सजिलो हुनेछ। यस विन्दूमा, हामी भन्न सक्दछौं कि तपाईको काम सजिलो हुनेछ जब हामीले उल्लेखित दायरामा नम्बरहरू सिक्दैछौं। ११ र १२ बाहेक अन्य नम्बरहरू हामीले उल्लेख गरेको नियम बमोजिम व्यवस्थित छन्। यो संख्या २०, 12०, र of० को १० को गुणनहरूमा जान्न सहि हुनेछ।
२०--20० वा -०-30० बीचको संख्या सिक्ने धेरै सजिलो हुनेछ किनकि तपाईंले नम्बर use प्रयोग गर्नुहुनेछ जुन तपाईंले पहिले सिकिसक्नुभयो। १०० पछि नम्बरहरू सिक्नु समान तर्कमा सम्पन्न हुन्छ। पहिलो, तपाईंले नम्बर कति अनुहारहरू समावेश गर्दछ भनेर बताउनु पर्छ। एक सयदुई सय, आठ सय जस्तै निर्धारण गरे पछि, बाँकी संख्या १ देखि १०० हो। अंग्रेजी नम्बरहरू तपाईंले भाग मिल्नै पर्छ।
अंग्रेजीमा संख्या सिक्दै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण! दैनिक बोलचालको भाषा प्रयोग गर्दा, जब यो संस्थागत वा औपचारिक मामिलाहरूको कुरा आउँछ अंग्रेजी नम्बरहरू सँग सामना गरिएको छ। थप रूपमा, स्कूलमा, काम, घर, खाना आदेश, लिखित निवेदन, ठेगाना पहिचान र अन्य धेरै स्थानहरूमा। अंग्रेजी नम्बर तपाईलाई जानकारी चाहिन्छ।
यदि तपाईंलाई अ the्ग्रेजीको संख्या बराबर थाहा छैन वा तपाईं अपूर्ण जान्नुहुन्छ भने, तपाईंले धेरै समस्याहरूको सामना गर्नुपर्नेछ। वास्तवमा, तपाईका धेरै कामहरू केवल यस कारणले रद्द गरिनेछ। यस सन्दर्भमा, तपाइँ तिनीहरूको हिज्जे र उच्चारणको साथ अंग्रेजी नम्बरहरू सिक्नुपर्दछ। सम्म, अंग्रेजी भाषा सिक्दै तपाईले पहिले नम्बरहरूको साथ सुरू गर्नु पर्छ।
अंग्रेजीमा नम्बरहरूको साथ व्यायाम
त्यहाँ बस्ने कोठामा तीस मानिस छन्। (बैठक कोठामा 31१ व्यक्ति छन्।)
लियोनेल मेसीले २०१ sixth मा आफ्नो छैठौं ब्यालोन डी ओर जितेका थिए। (लिओनेल मेसीले २०१ 2019 मा छैठौं ब्यालोन डी ओआर पुरस्कार जीते।)
पहिरो पछि छ सय मानिस घरविहीन थिए। (पहिरो पछि people०० मानिस घरबारविहीन भए।)
मैले बीस चोटि शान्त हुन भने। (मैले तपाईंलाई २० पटक चुप लाग्न भनें।)
उनी २०२० मा तेस्रो पटक फ्रान्स गए। (उनी २०२० मा तेस्रो पटक फ्रान्स गए।)
अंग्रेजीमा दशमलव नम्बरहरू कसरी पढ्ने?
अंग्रेजीमा दशमलव पढ्दै यो तुर्कीको तुलनामा फरक तरीकाले हुन्छ। दशमलव पोइन्ट जबकि यो पोइन्टको रूपमा पढिएको छ, बाँकीहरू एक एक गरी अंकको रूपमा पढिन्छ।
5: बिन्दु पाँच
:०: पोइन्ट तीन
: 75: पोइन्ट सात पाँच
06: पोइन्ट शून्य छ
::: दुई बिन्दु नौ पाँच
अंग्रेजीमा फ्र्याक्सनल नम्बरहरू कसरी पढ्ने?
अ in्ग्रेजीमा भिन्न बिन्दु पढ्दै दशमलव र संख्याहरू पढ्नुमा समानताहरू छन्। भिन्न संख्याको अंश गणना गणना प्रयोग गरी पढ्न सकिन्छ, र भाजकहरू संख्यात्मक संख्याहरू प्रयोग गरेर पढिन्छ। थप रूपमा, जब अंश एक भन्दा ठूलो हुन्छ, डिनोमिनेटरमा अर्डरहरूको संख्या बहुवचनमा पढिन्छ। हामीले कुरा गरिरहेको नियम संख्या २ बाहेक सबै नम्बरहरूमा लागू हुन्छ। जब डिनोमिनेटरमा नम्बर २ हुन्छ, फरक नियम लागू हुन्छ। त्यस्ता अवस्थाहरूमा, यदि अंश १ भन्दा आधा हो, यदि अंश १ भन्दा ठूलो छ भने आधा को रूपमा पढ्नुहोस्
१/1: एक तिहाई
//3: तीन अर्धौं
//5: पाँच आठौं
3 / 2: तीन भाग
अंग्रेजीमा प्रतिशत कसरी पढ्ने?
अ in्ग्रेजीमा प्रतिशत पढ्दै यो अत्यन्त सजिलो छ। थप रूपमा, हामीले यो पनि भन्नुपर्दछ कि प्रतिशत पढ्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यो विशेष गरी दैनिक जीवन र व्यापार जीवनमा प्रयोग गरीन्छ।
%%: छ प्रतिशत
%०%: तीस प्रतिशत
.36,25 XNUMX.२XNUMX%: छत्तीस पोइन्ट दुई पाँच प्रतिशत
%एक सय: एक सय प्रतिशत
%००%: पाँच सय प्रतिशत
अ in्ग्रेजीमा पैसाको रकम पढ्नको लागि भिन्न तरीका हो। पैसा रकम पढ्दा, पहिले पूरै नम्बर पढिन्छ। त्यसपछि मुद्रा अन्तमा थपियो। दशमलव संख्याहरूको मामलामा, बिन्दुको अघि र पछाडि छुट्टिएर पढ्नु पर्ने हुन्छ। साथै, यदि मुद्रामा सिक्काको नाम पढिएको छ भने, यो नाम अन्त्यमा थप्न आवश्यक छ। जे होस्, माथि उल्लेखित दशमलव पढ्दै फरक छ। त्यसकारण हामीले भन्नु पर्ने छ कि यी नियमहरू मात्र मुद्रामा लागू हुन्छ। विषयलाई राम्रोसँग बुझ्न हामी उदाहरणहरू सहित वर्णन गर्नेछौं!
$ :०: तीस डलर
Eur 55 यूरो: पचास यूरो
१£० £: एक सय पचास पाउन्ड
१२,12,66 Eur युरो: बाह्र यूरो छहठ्ठी
$ .45,35$.XNUMX: Forty डलर र five thirty सेन्ट
परिणाम स्वरूप तपाईले पैसाको रकम पढ्ने कुरामा गम्भीर भई काम गर्नुपर्नेछ।
अंग्रेजीमा उपायहरू कसरी पढ्ने?
अंग्रेजी मापन को एकाइ यो संक्षिप्त रूपमा टर्कीमा छ। यसका साथै, हामीले याद गर्नुपर्दछ कि मापन पढ्न कुनै कठिनाई छैन। यो पढ्न सम्भव छ किनकि यसलाई तुर्कीमा पढिएको छ।
M० मिटर: पचास मिटर
Km० किमी / घण्टा: प्रति घण्टा तीस किलोमिटर
१२ फुट: बाह्र फीट
2tsp: दुई चम्मच
अंग्रेजीमा कसरी पढ्ने?
टर्कीमा जस्तै, अ in्ग्रेजीमा वर्षको पठन सामान्य अंकहरू पढ्नु भन्दा अलि बढी जटिल छ। चार अ digit्कको संख्या समावेश भएको वर्षहरूमा, मुख्य रूपमा पहिलो दुई अ an्क पूर्णांकको रूपमा पढिन्छ। त्यसोभए हामीले बताउनुपर्दछ कि अर्को दुई अ inte्कहरू पूर्णांकको रूपमा पढिएको छ। यद्यपि, केहि बर्षमा यो स्थिति लागू गर्न सकिँदैन।
विशेष गरी नयाँ सहस्राब्दीको पहिलो १०० वर्षहरू पूर्ण अंकको रूपमा पढ्नुपर्दछ, चाहे ती चार अ are्क भए पनि। थप रूपमा, उनीहरूलाई दुई अंकको पूर्णांकको रूपमा पढ्न पनि सामान्य छ। अर्कोतर्फ, मिलेनिया कुनै पनि समय र कहीं पनि पूर्णांकमा पढ्नुपर्दछ। नयाँ शताब्दीहरू पूर्णांकको रूपमा पढिन्छन्, जस्तो कि तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। थप रूपमा, हजारौं शब्द प्रयोग गरिएको छैन। विशेष गरी पछिल्लो हजार बर्ष पढ्दा, हजार शब्दको प्रयोग प्रश्न बाहिर छ।
तीन अंकको बर्ष पढ्नमा फरक विधि देखा पर्‍यो। यो तीन-अ numbers्कको संख्याको रूपमा पढ्न सामान्य छ, साथै दुई-अंक नम्बर पछि एक अंकको संख्याको रूपमा पढ्नको लागि। दुई-अ years्क वर्षहरू अघिल्लो उदाहरणहरूमा जस्तै पूर्णांकको रूपमा पढिएको छ। यसका साथै तपाई कुनै ब्यक्तिलाई "बर्ष" लाई अभिव्यक्ति प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनी कुनै पनि गडबडबाट बच्न। यस तरिकाले, बर्षको अर्थ अधिक विशिष्ट बनाउन सकिन्छ। यद्यपि हामीले जोड दिएको जोड केवल दुई वा तीन अंक वर्ष पढ्दा गरिन्छ।
थप रूपमा, वर्ष "०" भन्दा पहिलेका वर्षहरू हुन् BC यो थपेर पढियो। ई.पू. लाई "bisi" भनिन्छ। हामी उदाहरणहरू सहित कसरी वर्षहरू पढ्ने भनेर वर्णन गर्न सक्छौं!
२०१:: बीस तेह्र वा दुई हजार तेह्र
२००:: दुई हजार छ
2000: दुई हजार
२०२०: दुई हजार बीस
1500: पन्ध्र सय
3000००० ईसापूर्व: तीन हजार ईसा पूर्व
अन्तमा हामीले शून्य कसरी पढ्ने भनेर कुरा गर्नुपर्दछ। शून्य उपयोग ब्रिटिश र अमेरिकी अंग्रेजी दुवैमा फेला पर्दछ। Nil प्रायः खेलकुद प्रतियोगिताको नतीजामा प्रयोग गरिएको अभिव्यक्ति हो। होइन अमेरिकामा प्रयोग नभएको अभिव्यक्ति हो।
जब यो विश्वव्यापी भाषा को लागी आउँछ, पहिले दिमाग अंग्रेजी आय यो कुनै पनि संयोग होइन। वास्तवमा, हामीले शब्दहरू सुनेका छौं कि अ English्ग्रेजी बारम्बार विश्वको साझा भाषा हो। यस बिन्दुमा हामी सजिलैसँग भन्न सक्छौं कि विश्वमा अंग्रेजी अ the्ग्रेजी भाषा हो। यद्यपि, सबैजना छक्क पर्छन् कि अंग्रेजी कसरी लोकप्रिय भयो।
अंग्रेजी व्यापक हुँदै गइरहेको छ; यो औद्योगिक क्रान्ति पछि अनुभव प्रक्रिया को बारे मा हो। व्यापारको अन्तर्राष्ट्रियकरणको लागि धन्यवाद, अ English्ग्रेजीले आफ्नो लागि स्थान पाउन शुरू गर्यो। एक वैश्विक भाषा; यो संसारमा सबैभन्दा धेरै बोलिने भाषा होईन। चिनियाँ; यो सम्भवत धेरै मानिसहरूले बोल्ने भाषा हो। यद्यपि यो अंग्रेजी जत्तिकै महत्त्वपूर्ण भाषा बन्न सफल भएको छैन।
हामी भन्न सक्दछौं कि भाषा आर्थिक र राजनीतिक दुबै कारणले विश्वव्यापी भएको छ। औद्योगिक क्रान्ति पछि अनुभव घटनाक्रम अनुसरण गर्न अंग्रेजी सिक्दै अनिवार्य भएको छ। थप रूपमा, मिडियामा 400०० भन्दा बढी वर्षदेखि अ English्ग्रेजी बोलेको तथ्य यो अर्को कारक हो जसले यसलाई महत्त्वपूर्ण बनाउँछ। लन्डनमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीको स्थापना एक विकास हो जुन यस सूचनाको पुष्टि गर्दछ।
अंग्रेजी अंग्रेजी भाषा कसरी भयो?
अंग्रेजी; यद्यपि यो अहिलेको २०२० को दशकमा धेरै समयसम्म संसारमा प्रभुत्व जमाउने भाषा हो, यसले यो सुविधा तुरून्त प्राप्त गरेको छैन। ऐतिहासिक घटनाक्रम पछि हामी भन्न सक्दछौं कि अ्ग्रेजी एक भाषा हो जसले सम्पूर्ण विश्वलाई प्रभुत्व जमाएको छ। अंग्रेजी; यो आर्थिक, कलात्मक र वैज्ञानिक शक्ति भएको देशहरूको आधिकारिक भाषा भएकोले, यो संसारभर फैलउन सजिलो भएको छ। यद्यपि हामी अझै भन्न सक्दछौं कि त्यहाँ केहि कारकहरू छन् जसले अ communication्ग्रेजीलाई विश्वव्यापी संचारमा अलग राख्छ।
बेलायती साम्राज्यको बृद्धि
संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रवेश ब्रिटिश साम्राज्यको शक्ति गुमे पछि प्रभुत्वशाली राज्यको रूपमा
बैंकि system प्रणालीको उदय र प्रसार
राज्यहरू बीचको सम्बन्धको विस्तार र यस कारणले गर्दा साझा भाषाको आवश्यकता छ
टेलिभिजन र रेडियो प्रसारणको उदय र प्रसार, विशेष गरी सिनेमा
वैज्ञानिक अनुसन्धान र शैक्षिक अध्ययनमा उल्लेखनीय प्रगति
जे होस् इन्टरनेट अझै बजार को लागी उपलब्ध छैन, मानिसहरु को लागी सूचना को पहुँच को अवसरहरु
निष्कर्षमा हामी भन्न सक्दछौं कि माथिका घटनाक्रमहरू अ becoming्ग्रेजी भाषामा आज भइरहेको छ।
हाम्रो युगमा अ English्ग्रेजीको महत्त्व के हो?
डिजिटल युग, जसको जग १ 1990 2000 ० को दशकमा राखिएको थियो; २००० को पछि र त्यस पछि २०१० को दशकमा यसले गम्भीर विकास प्रक्रिया सुरू गर्‍यो र आज बन्यो। सीमाना गायब; डिजिटल युगको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विकासको रूपमा ध्यान आकर्षित गर्दछ। अर्को शब्दमा, टर्कीमा बस्ने एक व्यक्ति; समय र स्थानमा भिन्नता हुँदाहुँदै पनि, उहाँ कुनै पनि समयमा विश्वको छेउमा बस्ने व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ। यस बिन्दुमा हामी भन्न सक्दछौं कि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रका मानिसहरूलाई साझा भाषा चाहिन्छ। अंग्रेजी; यो एक धेरै समय को लागी मानिस र संस्थाको साझा भाषा ब्यबस्थित भयो।
हामीलाई भर्चुअल संसारले प्रस्ताव गरेको सुविधाहरूबाट फाइदा लिनको लागि अंग्रेजी अनुवादहरू पहिले भन्दा बढि चाहिन्छ। दुबै वेबसाइट र मोबाइल अनुप्रयोगहरू; यसले अंग्रेजीलाई साधारण भाषाको रूपमा प्रयोग गर्दछ। थप रूपमा, ई-वाणिज्य, जसले परम्परागत वाणिज्य बदल्छ, अंग्रेजी पनि प्रयोग गर्दछ। अर्को शब्दहरुमा, यो आवाश्यक हुन्छ कि तपाइँ अ know्ग्रेजी जान्न को लागी पढ्न, बुझ्नु र भर्चुअल विश्व मा तपाईले देख्नु भएको हरेक चीज बाट फाइदा लिन!
किन अंग्रेजी महत्त्व राख्छ प्रश्नको उत्तर दिँदा, व्यक्तिले बुझ्नको लागि व्यावहारिक चीजहरूको बारेमा कुरा गर्न आवश्यक छ। अ and्ग्रेजीको ज्ञान वैज्ञानिक र प्राविधिक घटनाहरूको अनुसरण गर्न आवश्यक छ। उदाहरण को लागी, कोरोनाभाइरस, खोप अध्ययन र अधिक धेरै मुद्दाहरूको बारेमा साझा गरिएको प्रत्येक विवरण; यसले सामान्यतया विदेशी स्रोतहरू समावेश गर्दछ।
थप रूपमा, हामी भन्न सक्दछौं कि संसारको कुनै पनि ठाउँमा मानिसहरू जब चाहे उनीहरूले सम्पूर्ण संसारसँग कुरा गर्न सक्दछन्। यूट्यूबमा अपलोड गरिएको अ videos्ग्रेजी भिडियोहरूका लागि पूर्ण भिन्न क्यारियर र शिक्षा अवसरहरूको सामना गर्ने व्यक्तिहरूको संख्या कुनै पनि होइन! त्यहाँ कोही व्यक्तिहरू छन् जुन हजारौं अनुयायीहरूसँग इन्टरनेटमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर कुरा गर्छन्! भिडियो र पोष्टहरू; यो प्रकाशको गतिमा फैलिँदैछ, त्यसकारण इन्टरनेटमा। जे होस्, जो कोही आफ्नो आवाज सुन्न चाहन्छ अंग्रेजी गर्नु पर्छ!
हामी राम्रो उदाहरणका साथ वर्णन गर्न सक्दछौं कि अंग्रेजीले कसरी सीमाहरू नष्ट गर्दछ। स्वीडेनबाट ग्रेटा थन्बर्ग, अब १ 18 बर्षको; अगस्त २०१ 2018 मा, उनले मौसम परिवर्तनको बिरूद्ध कदम चाल्ने बिन्दुमा विरोध प्रदर्शन गर्न शुरू गरे। मौसमको लागि स्कूल हडतालका साथ ध्यान आकर्षित गर्दै, थुनबर्ग; त्यसबेलादेखि उनी एक जलवायु कार्यकर्ता थिए। थुनबर्गलाई अन्य कार्यकर्ताहरू भन्दा फरक पार्ने सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा निस्सन्देह उसको उत्कृष्ट शैली हो। अर्को शब्दहरुमा, Thunberg उनी के भन्न चाहान्छ भनेर वर्णन गर्दछ सबै भन्दा सही वाक्य र स्वरको साथ; यो पनि यसको महान अंग्रेजी संग एक मजबूत छाप बनाउँछ। थुनबर्ग; अंग्रेजी यदि ऊ किशोरावस्थामा भएको भए सायद धर्मी अवस्थाको बाबजुद उसले आफ्नो आवाज कहिल्यै सुन्ने नै थिएन!
अ translations्ग्रेजी अनुवादको प्रयोग पनि धेरै व्यापक! हामीले भन्नु पर्दछ कि अंग्रेजी अनुवादहरू चिकित्सा, प्रविधि र अन्य धेरै क्षेत्रमा विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा प्रयोग भएको छ। थप रूपमा, विशेष गरी डिजिटल संसारमा अ translations्ग्रेजी अनुवाद यो अत्यधिक उत्पादक रोजगार को लागी प्रयोग गरीन्छ। विशेष रूपमा, डिजिटल मार्केटिंगमा अंग्रेजीको प्रभाव उल्लेख गर्नु आवश्यक छ। ठूला ब्रान्डहरू बढ्न र ग्लोबल हुनको लागि डिजिटल सम्भावनाहरूको अस्तित्व अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ! त्यसकारण, हरेक कम्पनीको अंग्रेजी अनुवादको लागि मांग पनि बढ्दो छ। थप रूपमा, अ translation्ग्रेजी अनुवाद यसका सेवाहरूमा पनि सुधारहरू छन्।
अनुवादको बढ्दो मागको कारण, अनुवाद सेवाहरूमा पनि नवीन आविष्कारहरू हुँदैछन्। रचनात्मक अनुवाद सेवाहरूको अस्तित्वले अंग्रेजी अनुवादहरू विश्वभर साझा गर्न सक्षम गर्दछ। नतिजाको रूपमा, हामी भन्न सक्छौं कि अंग्रेजी अनुवाद सही डिजिटल संचार संसारको बिचमा छ। थप रूपमा, कलात्मक गतिविधिहरूलाई अंग्रेजी अनुवादलाई नजिकबाट पछ्याइन्छ। अर्को शब्दमा, अ translation्ग्रेजी अनुवाद; यो जतिसक्दो चाँडो विकासोन्मुख टेक्नोलोजी सम्भावनाहरू अनुकूलन गरेर प्रत्येक क्षेत्रमा आफैँ ठाउँ पाउँछ।
यी सबै कारणहरूको लागि, हामी यो भन्न सक्दछौं कि हाम्रो युगमा अ्ग्रेजी अत्यन्त महत्त्वको छ। स्कूलहरूमा, कार्य वातावरण र जहाँसुकै तपाइँ सोच्न सक्नुहुन्छ अंग्रेजी सिक्नुहोस् यो एक आवश्यकता हुन बन्द भयो र अनिवार्य भयो।